ဘုန်းကျော်: Apr 9, 2011
သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်။ ၁၉၉၇-ခုနှစ်သင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်မှာ ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒိ, နောက်ပိုင်း သင်္ကြန်ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားလို့မေးရတော့မယ်။
တန်ခူးလဆိုရင် သြစီမှာ စတင်အေးစပြုနေပြီ..။ ရေပတ်ရင် ရေနွေးလေးမှ အဆင်ပြေ..။ ဒီလိုပြောလို့ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်လို့ မထင်နဲ့အုံး..။
"အအေးမပတ်အောင် ရေနွေးလေးမှ အဆင်ပြေတယ်ဗျ"
ရေပတ်တဲ့အခန်းကလည်း အလုံပိတ်ဖြစ်ရမယ်။ ရေနွေးကလည်းသိတဲ့အတိုင်း...လေသလပ်ရင် အေးပြီ..ဆိုတော့ ရေနွေးလေးနဲ့အခန်းအလုံပိတ်ထဲမှာပတ်...။ ပတ်တဲ့အချိန်မှာ တအိမ်လုံးကို အပူစက်ဖွင့်ထား။ ပြီးရင် အားရပါးရခွက်စောင်းခုတ်တော့...။ ကဲ..ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းရှိတယ်။ ဒီပုံစံနဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီလား။ သင်္ကြန်အရသာကော ခံစားလို့ရပြီးလားဆိုတော့..။ အဖြေက...နိုး...Man... This would not beabloddy cool Burmese Thingyan.
မြန်မာသင်္ကြန်ဆိုတာက ပူနေတဲ့ကာလမှာ အပူကင်းအောင် ရေလောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလား..။ အေးတဲ့အချိန်မှာ ရေလောင်းတာ မြန်မာသင်္ကြန်မဟုတ်။ မြန်မာသင်္ကြန်စစ်စစ်ကို တခါလောက် ကြုံလိုက်ချင်တယ်။
နိုင်ငံခြားမှာနေလို့ သင်္ကြန်ကိုမေ့တယ်လို့ထင်လား။ လုံးဝမမေ့။ လူတိုင်းက ဒီအတိုင်းဖြေမယ်။ တချို့ ဆိုရင် သင်္ကြန်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှုးတယ်ထင်လဲ..။ နေအုံး..ပြောပြအုံးမယ်။
ရာသီဥတုကလည်းအေး။ ပတ်စရာလူလည်းမရှိ..။ ဒီတော့...အိမ်တံခါးတွေပိတ်..။ မြို့ မငြိမ်းရဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဖွင့်...။ အရက်ပုလင်းထောင်။ ပြီးတော အိမ်မှာရှိတဲ့ မိန်းမနဲ့ခလေးကို ရေချိုးခန်းထဲထည့်။ ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့ အသားကုန်လောင်းပါလေရော...။
မိန်းမက ဗမာဆိုတော့ ကွိုင်မရှိ။ အထာပေါက်ပြီးသား။ မပေါတာက ခလေးတွေ။ သြစီမှာမွေး၊ ကြီးတဲ့သူတွေ။ သင်္ကြန်ဆိုတာ နားမလည်။ ခလေးတွေက ဒီလိုရေလောင်းတာတခါမှမကြုံခဲ့ဘူး။ ဒီမှာတင် ကြောက်လန့်ပြီး...သူတို့အသားကုန်ငိုပြီ..။ သူတို့အထင် သူ့ အဖေနှိပ်စက်နေတာလားပေါ့..။ ကိုယ်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း စောက်ရမ်း။ ဒါကိုကြည့်ပြီး အဖေလုပ်တဲ့သူက အားရပါးရရယ်..။ စိတ်ထဲမှာ ငါ့..ဗမာသင်္ကြန်တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ ...။
ဒီလိုသင်္ကြန်သည် ၂၀၀၆-ခုနှစ် ကျနော်ဘုန်းကျော်ရဲ့ သြစီသင်္ကြန်ဖြစ်ပါကြောင်း...အားလုံးကို အသိပေးအပ်သည်..။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, April 09, 2011